Jona 1: 1-16
Ary tonga tamin'i Jona, zanak'i Amitahy, ny tenin'i Jehovah nanao hoe:
Nefa Jona nitsangàna handositra ho any Tarsisy mba hiala eo anatrehan'i Jehovah; ary nidina tany Jopa izy ka nahita sambo hankany Tarsisy, dia nandoa ny karamany ka niondrana taminy hiara-mandeha tamin'ny tao ho any Tarsisy hiala eo anatrehan'i Jehovah.
Dia raiki-tahotra ny matilo, ka samy nitaraina tamin'ny andriamaniny avy, sady nariany tany anaty ranomasina ny zavatra tao an-tsambo mba hampahatony ny loza. Fa Jona kosa efa nidina nankao anaty sambo ka nandry renoky ny torimaso.
Dia nankao aminy ny kapitenin-tsambo ka nanao taminy hoe: Endrey ity hianao renoky ny torimaso foana eto! Mitsangàna, ka antsoy ny Andriamanitrao, ka dia tsy ho faty isika.
Ary dia samy nanao tamin'ny namany hoe izy: Avia isika hanao mba hizahantsika izay mahatonga izao amintsika. Dia nanao filokana izy, ka Jona no azo.
Dia hoy ireo taminy: masina hianao aminay lazao aminay: Noho ny amin'iza moa no mahatonga izao loza izao amintsika? Inona no raharaha fanaonao? Ary avy taiza hianao? Aiza no taninao? Ary avy amin'ny firenen'iza hianao?
Dia raiki-tahotra indrindra ny olona nanao taminy hoe: Adray izato atanao izato! Fa fantany fa nandositra hiala eo anatrehan'i Jehovah izy, satria efa nambarany taminy izany.
Dia hoy ireo taminy: Hataonay ahoana ary hianao mba hahatony ranomasina aminay? Fa mbola nihananonja ihany ny ranomasina.
Dia nitaraina tamin'i Jehovah izy ka nanao hoe: Mifona aminao izahay, Jehovah ô, aoka tsy ho faty izahay noho ny amin'ny ain'ity lehilahy ity ary aza atao ho mpandatsaka ra marina izahay; fa Hianao, Jehovah ô, efa nanao izay sitraky ny fonao.
Dia nobetain'izy ireo Jona ka natsipiny tany anatin'ny ranomasina; ary dia nitsahatra ny fisafoaky ny ranomasina;